Himalaya Dainik » अब लकडाउन खोलेर, सावधानी अपनाउनु पर्छ : रेखा थापा
अब लकडाउन खोलेर, सावधानी अपनाउनु पर्छ : रेखा थापा
काठमाडौं, २० जेठ / चर्चित नायिका रेखा थापाले विदेशबाट नेपालीहरु ल्याउने घोषणा गरेको राज्यसँग उनीहरु फर्किएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् ।
सोमबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनिन्,’उनीहरुलाई ल्याउने अरे, ल्याएपछि कहाँ एस्ट्याबलिश गर्ने ?
के योजना छ ? नेपाली जनताले परिआउँदा हरेक समय राज्यलाई सहयोग गरेका छन् । यो कुरा चाहीँ फेरि कसैले बिर्सिनुहुँदैन नि । यो लकडाउनको अवधिमा पनि सबैले सरकारलाई सहयोग गरेकै छैन् । कसैले पनि असहयोग गरेका छैनन् । तर, राज्य व्यवहारिक हुनुपर्यो ।’
नायिका थापाले कोरोनाको कहरका कारण देशको अर्थतन्त्र चौपट भएको बताउँदै लकडाउनमात्रै सोलुशन नभएको जिकिर गरिन् । उनले भनिन्,’मिडल क्लास फ्यामिलीलाई पनि अहिले टेन्सन भैसक्यो ।
उसले राज्यसँग माग्नपनि सक्दैन्, राज्यको खानपनि सक्दैन् । त्योभन्दापनि महत्वपूर्ण कुरा त मान्छेहरु मानसिक रुपमापनि विरामी भैसके क्या । सरकारले कोरोनाका कारण के साईड ईफेक्ट परेको छ भनेर बुझ्नुपर्दैन ?’
प्राइम टाइम टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम “जनता जान्न चाहन्छन्” मा पत्रकार ऋषि धमला र नायिका रेखा थापा विच समसामयिक बिषयमा गरेको कुराकानी हेर्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १८:२८